गृहमन्त्रीज्यु, अब जनताले आफ्ना छोरीको सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्ने हो ? ‘पत्ता लागिसकेको’ हत्यारा कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? « News24 : Premium News Channel
काठमाडौँ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको १ वर्ष पुगेको छ । यो एक वर्ष राष्ट्रिय लज्जाको एक वर्ष पनि हो । सम्भवतः टेलिभिजन कार्यक्रमहरुमध्ये यस विषयमा सबैभन्दा बढी रिपोर्टिङ गर्ने कार्यक्रम र त्यसको सञ्चालकका हैसियतले यस विषयमा टुंगो लाग्ने गरी खोजमुलक सामग्री प्रस्तुत गर्न र अपराधी पत्ता लगाउन प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेकोमा म निर्मला पन्तको परिवारजन तथा आम दर्शकहरुसँग क्षमा याचना गर्दछु ।
त्यसपछि यो देशका गृहमन्त्रीले हत्यारा पत्ता लागिसक्यो चाँडै सार्वजनिक हुन्छ भनेका छन् । १ वर्ष पनि चाँडै होइन भने गृहमन्त्री ज्यु, तपाईंको परिभाषामा चाँडै भनेको के हो ? स्पष्ट पारिदिनुहोला र हिजो मात्र पनि तपाईले आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत अर्को आश्चर्यजनक कुरा भन्नुभयो । निर्मला पन्तको जस्तो बलात्कारको घटना हिजो पनि हुन्थ्यो, आज पनि छ, भोलि पनि केही समयसम्म रहन्छ । यस किसिमका अपराध पुर्णतया निषेध गर्न सकिँदैन । गृह मन्त्री ज्यु, के अब जनताले आफ्ना छोरीचेलीको सुरक्षा आँफैले गर्नुपर्ने हो ? युद्धकालमा यस्ता गतिविधि, कृयाकलाप गर्नेलाई यस्तै भन्नुहुन्थ्यो तपाई ? सत्ताको मात यति धेरै यति जाँडै चढ्न कसरी सक्यो । यो चाहिँ पत्ता लगाउन जरुरी देखियो ।
फेरि पनि भन्छु यो केशलाई अल्मल्याउन हाम्रा रिर्पोटहरुले पनि प्रभाव पारे भने हामीलाई माफ मात्रै होइन सजाय नै दिनुपर्छ र शुरुवात हामीबाटै होस् । गतवर्ष स्टुडियोमा टाँसिएको यो पोष्टर सुरक्षित राखिएको थियो । मनमा शंका थियो कि निर्मलाले सजिलै न्याय पाउन के सक्थिन् । आजको कार्यक्रममा यो केशको केही गहन विषय उठाउने प्रयास गर्ने छाँै । आजको कार्यक्रममा फेरी यो पोष्टर टाँस्न बाध्य भएको छु तर प्रधानमन्त्रीले हत्यारा बलात्कारी पत्ता लगाउन १२ वर्ष पनि लाग्न सक्छ भन्नुभएकाले सोच्दैछु– यो पोष्टर १२ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ला कि ? तपाई सोच्दै गर्नुहोस् म टाँस्नतिर लाग्छु ।